VESTIGE Canvas Fabric Shopping Bag - Green: Buy Sell Online @ Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
VESTIGE Canvas Fabric Shopping Bag - Green
Product details of VESTIGE Canvas Fabric Shopping Bag - Green
Canvas Fabric + Leather strap + Long fabric strap
Dimension - 18.2x18 inches
Specifications of VESTIGE Canvas Fabric Shopping Bag - Green
????????????????????????? ?????????? - ???????????
Ratings & Reviews of VESTIGE Canvas Fabric Shopping Bag - Green
မြန်မာ့ရိုးရာရှေးဒီဇိုင်း လက်ဆွဲအိတ် က ဒီဇိုင်းရိုးရိုးလေးနဲ့ မိုက်တယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလွယ်လို့ကောင်းပြီး အကြမ်းခံပါတယ်။ ခရီးသွားရင်လဲ သုံးလို့ကောင်းတယ်။
Vestige ကအိတ်က တစ်ခါဝယ်ဖူးတယ်။ ဈေးကြီးပေမယ့် ပစ္စည်းကောင်းတော့ ပေးရတာတန်ပါတယ်။